Uzoba nobumfihlo, ukuthula nendawo ethokomele eduze nemvelo! Eduze, imizuzu emi-5 nje ngemoto, kukhona izimakethe, amabhikawozi nezitolo.
Indawo yethu inengqalasizinda ephelele yokusebenzela izivakashi, okuhlanganisa abalandeli bakasilingi ne-smart TV, ikhishi elihlomele, i-fiber optic Wi-Fi - 50 mb - endlini yonke.
Sihlala kule ndlu futhi sibeka ukubaluleka okukhulu kokuphepha, umoya ohlanzekile, nezikhathi zokuphumula. Sifuna ukwabelana nabanye ngalokhu.
4.89(44 okushiwo abanye)